Diyaaradihii hakiyay duulimaadyada oo loo la'yahay meel la dhigo - BBC News Somali
Diyaaradihii hakiyay duulimaadyada oo loo la'yahay meel la dhigo
Waxaa toddobaadyadii la soo dhaafay la joojiyay qaar ka mid ah duulimaadyada caalamiga ka dib markii uu dunida ku faafay fayraska corona.
Dalal badan oo caalamka ah ayaa sheegay in kiisas badan laga helay xanuunka corona oo markiisii hore ka dilaacay dalka shiinaha.
Saameynta xanuunka ayaa keentay in dad badan aysan safrin, wadamo badanna ay joojiyeen duullimaadyadii caalamiga ahaa, taasoo keentay in inta badan shirkadaha diyaaradaha ay joojiyaan duulimaadayada, maadaama ay yaraadeen macaamiisha safreysa iyo dalalka la tagi karo.
Wargeyska The Financial Times ayaa kusoo warramay in diyaarado gaaraya 80 kun ay joojiyeen duulimaadyadii, taas oo ka dhigan in dhammaan diyaaradahaas ay u baahdeen meelo la dhigo, maadaama aysan hawada ku jirin.
Diyaaradaha joojiyay duullimaadyada waxaa ka mid ah, Emirates, Delta, Qantas, Lufthansa iyo kuwa kale oo badan oo yareeyay safarada sida KQ, British Airway iyo kuwo kale.
Diyaaradaha ayaa markii hore isku badeli jiray goobaha la dhigo diyaaradaha oo marka mid kuwo hawada ku jiraan, kuwa kale ayaa yaali jiray bakinnada eelaboorada ku dhex yaalla.
Shirkadda Delta Airline ayaa sheegtay inay joojineyso boqolkiiba 70 duulimaadyadii ay sameyn jirtay, waxayna intaa ku dartay in ay fariisinayaan lix boqol oo diyaaradood.
Madaxa shirkadda Delta, Ed Bastian ayaa sheegay in sidoo kale ay ka fikirayaan in ay hawlgab ka dhigaan diyaaradaha duugga ah.
Sidoo kale shirkadda diyaaradaha ee Qantas ayaa sheegtay in ay si ku meel gaar ah u hakineyso 150 diyaaradood, haddana ay wadaan wadahadalo ku aadan sidii loo heli lahaa meel la dhigo diyaaradahaas.
Madaxa shirkadda Qantas, Alan Joyce, oo la hadlay warbaahinta Mareykanka, ayaa sheegay in dedaallada kahortagga xanuunka corona ay keentay in ay aad hoos ugu dhacdo tirada dadka safra, taasina ay khasaaro ku keentay shirkadaha duulimaadyada.
Sido kale shirkadda duulimaadyada ee dalka Jarmalka ee Lufthansa ayaa sheegtay in ay hakisay duulimaadyada ay ku tegi jirtay meela badan oo caalamka ah.
Lahaanshaha sawirka Lauren O'Neil
Mareykanka waxaa la soo wariyay in shirkadaha duulimaadayada qaar ay waayeen meel la dhigo diyaaradaha, waxaana ay ku qasbanaadeen in diyaaradaha loo weeciyo xarumo lagu tijaabiyo diyaaradaha cusub, saldhigyada milateri iyo goobo kale.
Sidoo kale qaaradaha Yurub, Mareykanka iyo Aasiya waxaa la sheegay in qiimaha laga qaado goobaha la dhigo diyaaradaha ay sare u kacday, maadaama ay adag tahay in la helo goobo bannaan oo la dhigo diyaaradaha.
Magaalada Copenhagen ee dalka Denmark waxaa la sheegay in ciriiriga ka jira goobaha la dhigo diyaaradaha ay gaartay heer aan la maleysan karin, waxaana maamulka garoonka diyaaradaha ee magaaladaas uu la yimid qorshe cusub.
Labo ka mid ah halka ay diyaaradaha ku ordaan ee garoonka diyaaradaha ee Copenhagen ayaa la sheegay in laga dhigay meel la dhigo diyaaradaha, si loo heelo dhul dheeraad ah oo la dhigo diyaardaha joojiyay duulimaadyada.
Dan Meincke oo ka mid ah mas'uuliyiinta garoonka Dan Meincke ayaa warbaahinta CNN ee Mareykanka u sheegay in qorshaha hadda ay dejiyeen ee ah in halkii diyaaradda ay ku ordeysay marka ay caga dhiganeyso la dhigo karo oo keliya lixdan diyaaradood.